6 Ma n’ụbọchị ndị a, mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-amụba, ndị Juu na-asụ Grik+ malitere ịtamu ntamu megide ndị Juu na-asụ Hibru, n’ihi na a na-eleghara ndị inyom ha di ha nwụrụ anya n’ihe ndị a na-ekesa kwa ụbọchị.+
2 Ya mere, mmadụ iri na abụọ ahụ kpọrọ ìgwè ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs ka ha bịakwute ha. Ha wee sị ha: “Ọ dịghị mma ka anyị hapụ okwu Chineke wee na-ekesa ihe oriri na tebụl.+
3 Ya mere, ụmụnna anyị, chọpụtanụ+ n’onwe unu ndị ikom asaa a gbaara ezi àmà n’etiti unu, bụ́ ndị jupụtara na mmụọ nsọ na amamihe,+ ka anyị mee ha ndị ga na-ahụ maka ọrụ a dị mkpa;
4 ma anyị onwe anyị ga-anọgidesi ike n’ikpe ekpere, na-ejekwa ozi banyere okwu Chineke.”+
5 Ihe ahụ e kwuru masịkwara ìgwè mmadụ ahụ dum, ha họkwaara Stivin, bụ́ nwoke jupụtara n’okwukwe na mmụọ nsọ,+ nakwa Filip+ na Prọkọrọs na Naịkenọ na Taịmọn na Pamenas na Nikọleọs, bụ́ onye Antiọk a tọghatara atọghata;
6 ha wee mee ka ha guzo n’ihu ndịozi ahụ, mgbe ha kpesịrị ekpere, ha bikwasịrị ha aka n’isi.+
7 Ya mere, okwu Chineke nọ na-eto eto,+ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ Jizọs nọkwa na-amụba nke ukwuu na Jeruselem;+ oké ìgwè ndị nchụàjà+ malitekwara irube isi+ n’okwukwe Ndị Kraịst.
8 Ma ebe Stivin jupụtara n’amara na ike, ọ nọ na-eme oké ihe ebube na ihe ịrịba ama+ n’etiti ndị mmadụ.
9 Ma ndị ikom ụfọdụ biliri, bụ́ ụfọdụ n’ime ndị ahụ a na-akpọ Ụlọ Nzukọ nke Ndị A Tọhapụrụ Atọhapụ, na nke ndị Saịrini na ndị Alegzandria+ na ndị si Silishia+ na Eshia, ịrụ Stivin ụka.
10 Otú ọ dị, amamihe+ na mmụọ o ji na-ekwu okwu karịrị ha.+
11 Mgbe ahụ, ha kpaliri ndị ikom na nzuzo ka ha kwuo, sị:+ “Anyị nụrụ ka ọ na-ekwulu+ Mozis na Chineke.”
12 Ha wee kpasuo ìgwè mmadụ na ndị okenye na ndị odeakwụkwọ, mgbe ha bịakwutere ya na mberede, ha kpụkwaara ya n’ike ma duru ya gaa Sanhedrin.+
13 Ha kpọpụtakwara ndị akaebe ụgha,+ bụ́ ndị sịrị: “Nwoke a adịghị akwụsị ikwu okwu megide ebe nsọ a nakwa megide Iwu ahụ.+
14 Dị ka ihe atụ, anyị nụrụ ka ọ na-ekwu na Jizọs a bụ́ Onye Nazaret ga-akwatu ebe a ma gbanwee omenala ndị Mozis nyefere anyị n’aka.”
15 Ka ndị niile nọ na Sanhedrin legidere ya anya,+ ha hụrụ na ihu ya dị ka ihu mmụọ ozi.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D44%26Chapter%3D6%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl